Shirkii dib u heshiisiinta oo lagu soo geba gebeeyay Doolow. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR JUBALAND Shirkii dib u heshiisiinta oo lagu soo geba gebeeyay Doolow.
Shirkii dib u heshiisiinta oo lagu soo geba gebeeyay Doolow.
Shirkani dib u heshiisiinta oo loo qabtay bulshada kunool Gobolka Gedo ayaa lagu soo geba gebeeyey degmada Doolow ee Gobolkaasi.
Waxaa ka qeybgalay Masuliyintan ka tirsan Dowlad Gobaledka Jubbaland,gaar ahaana Wasiirka Amniga Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, Wasiiru ku xigeenka Arrimaha Gudaha Cabdiraxman Maxamed Xasan, Guddomiye kuxigeenka Gobalka Gedo sheikh Maxamed Xuseen Isaaq Al-qaadi Guddomiyasha Degmoyinka Gobalka Gedo iyo Bulsshada Rayidka.
Shirkan oo socday muddo 5 maalmood ah ayaa looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada Gobolkaasi,iyadoo waxyaabihii shirkaasi ku saabsanaa ay si wada jir ah u soo dhaweeyeen bulshada gobolkaasi.
Guddomiye kuxigeenka Gobalka Gedo sheekh Maxamed Xuseen Isaak Al-qaadi Wasiirka Amniga Dowlad Gobaledka Jubba Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Wasiiru ku xigeenka Arimaha Gudaha ayaa bulshada ku dhaqan gobolkaasi ugu baaqey in ay nabadda iyo horumarka ka wada shaqeeyeen.
Waxaa uu shirkani bilow u yahay qorshe la doonayo in sidi loo heli lahaa wadiiiqooyin sahlaya dhismaha Golayaashii deegaanka ee Gobolkaasi Gedo.
Previous articleWasiirka Waxbarashada XFS oo tababar u furay 25 macalimiin ah.
Next articleBukaanno ka bogsaday qaraxii Zoppe oo dalka dib ugu soo laabtay